WARBIXIN: Khabiirka Sky Sports Ee Tony Gale Oo Ku Dooday In Harry Kane Uu 250 Milyan U Qalmo Oo Uu Neymar Ka Qiimo Badan Yahay Iyo Lacagtan Oo Garoonka White Hart Lane Dhisi Karta. – WWW.Gool24.net
WARBIXIN: Khabiirka Sky Sports Ee Tony Gale Oo Ku Dooday In Harry Kane Uu 250 Milyan U Qalmo Oo Uu Neymar Ka Qiimo Badan Yahay Iyo Lacagtan Oo Garoonka White Hart Lane Dhisi Karta.
Real Madrid ayaa doonaysa in ay lacag rekoodh aduun ah kula wareegto xidiga xulka qaranka England iyo kooxda Tottenham ee Harry Kane kadib markii uu bandhig cajiib ah sameeyay saddexdii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay . Harry Kane ayaa si cad u muujiyay in uu ka mid yahay gool dhaliyaasha aduunka ugu fiican waxaana tan iyo maanta markii ay xalay soo baxday in Real Madrid ay lacag waali ah ku doonayso Harry Kane soo baxaysay dooda ah haddii uu Harry Kane lacagtan u qalmo in in lagu iibsado.
Khabiirks Sky Sports ee Tony Gale ayaa aaminsan in Harry Kane uu waqti xaadirkan ka fiican yahay xidiga taariikhda kubbada cagta aduunka ugu fiican ee Neymar Jr kaas oo ay PSG xili suuqii dhawaa kula wareegtay 222 milyan euros wuxuuna Tony Gale sheegay in Tottenham ay Harry Kane ku iibiso 250 milyan eruos si ay garoonkeeda White Hart Lane lacagtan ugu maal galiso.
Tony Gale oo ka hadlayay Sky Sports ayaa yidhi: “Waxaan ka soo qaadayaa in qof kastaaba uu qiimo leeyahay, miyayna lahayn, anigu waxaan filayaa in isagu(Kane) uu ka qiimo badan yahay Neymar, taas ayaan xaqiiqdii qabaa. Anigu waan jecelahay Neymar, laakiin Harry imisa gool ayuu helayaa? goolasha ayaa wax ah, waxaan ula tagi lahaa £250 milyan oo gini”.
Tottenham ayaa hadda dhisme cusub ku wada garoonkeedii hore ee White Hart Lane wuxuuna Tony Gale aaminsan yahay in Harry Kane oo Real Madrid lala xidhiidhinayaa uu garoonkan u dhisi lahaa isla markaana ay kaga baxsan karaan lacag dayn badan oo ay galaan.
Dhinaca kale Tony Gale ayaa sheegay in haddii Harry Kane uu baxo in gudoomiyaha Tottenham ee Daniel Levy uu waalan doono, wuxuuna sababta ku sheegay in haddii garoonka lagu dhiso lacagta Harry Kane ayna haddana micno yeelan doonin in garoon aad hesho oo aanad haysan ciyaartoydii ugu fiicnayd ee garoonka buuxin lahayd.
Tony Gale oo Kane sii amaanaya ayaa yidhi: “Isagu kan ugu fiican, ugu dhawaan waa gool dhaliyaha ugu fiican ama mid ka mid ah gool dhalyaasha waqti xaadirkan aduunka ugu fiican. Waxay u baahan yihiin in ay bangiga u jabiyaan si ay u sii haystaan, laakiin haddii uu jiro ciyaartoy ay tahay in uu u qalmo in bandhiga loo jabiyaa waa Harry Kane”.
Gudoomiyaha kooxda Tottenham ee Daniel Levy ayaa ah nin looga cabsado wada xaajoodyada suuqa kala iibsiga waana nin ay adag tahay in laga dhaqaajiyo waxa uu doonayo wuxuuna iibka Harry Kane aqbali karaa kaliya haddii ay waali ku noqoto dalabka lagu doonayaa si la mid ah Gareth Bale oo Real Madrid ay hore uga dhigtay xidiga aduunka ugu qaalisan.